OS X တွင်ပုံသေ browser ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ ငါက Mac ကပါ
လက်ရှိတွင် Safari သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံးဘရောင်ဇာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စနစ်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုသည်ပြီးပြည့်စုံပြီးမည်သည့်အရာမျှလုပ်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ bookmarks အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အတော်လေးမကြာသေးမီကအထိ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်အတူကြည့်ရှုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Safari ဖြစ်သည် နောက်ဆုံးပေါ် Chrome ဗားရှင်းများသည်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုနှင့်အတူ Mac ၏အရင်းအမြစ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ဘက်ထရီကိုမခံစားစေဘဲ။ ကံကောင်းစွာပဲ Chromium ပရောဂျက်ကဒီပြdamနာကိုဖြေရှင်းဖို့ Chrome ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည် (သို့) ဘက်ထရီပြwithoutနာမရှိဘဲ Laptop ပေါ်ရှိ Chrome Extensions များကိုခံစားနိုင်ပါပြီ။
ဝန်ခံရမည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Chrome ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်၊ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပြissuesနာများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ MacBook ကြုံခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Safari သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ ငါအခါအားလျော်စွာငါလွဲချော်တစ်ခုတည်းသောအရာ extension ကိုဖြစ်ကြသည်။ Firefox ကဲ့သို့ Chrome တွင်များစွာသော extensions များစွာရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အညွှန်းကိုအမြင့်ဆုံးသို့ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါပေမယ့် extension များသာမကဘဲ bookmarks များထပ်တူပြုခြင်းသည် browser (ဘရောက်ဆာ) များတပ်ဆင်ထားသည့်ကိရိယာများ (Windows) နှင့်လည်းသူတို့ကိုကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်း၊ ကံမကောင်းတာကတော့ Safari ကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါ။
မင်းအတွက် Mac အတွက်အကောင်းဆုံး browser ၎င်းသည် Safari နှင့်ကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းကိုသင်ပုံမှန်သတ်မှတ်လိုသောကြောင့်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။
OS X ရှိပုံသေဘရောက်ဇာကိုပြောင်းပါ
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုသင် Chrome, Firefox, Tor သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် browser ကိုမဆိုအသုံးပြုလိုပါကလိုက်နာရန်နည်းလမ်းမှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ OSX ရှိ default browser (Safari) ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသည်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့သည်အထိအစာကြေ System preferences, ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အထက်ပိုင်းမှာရှာတွေ့သောပန်းသီး menu တွင်တည်ရှိသည်။
System Preferences အတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် tab ကိုသွားသည် ယေဘုယျ.
အထွေထွေအတွင်းမှာငါတို့ option ကိုရှာရန်ရှိသည် ပုံမှန်ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုနှိပ်ပြီးလက်ရှိ default browser မှာရှိတဲ့မြှားကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Mac ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ browser အားလုံးကိုပြလိမ့်မယ် ငါတို့လိုချင်သောအရာကိုရွေးပြီးဝင်းဒိုးကိုပိတ်လိုက်ပါ.
ယခုအချိန်ကတည်းက Safari ကိုမဖွင့်ဘဲ link တစ်ခုကိုနှိပ်တိုင်းအချိန်တိုင်း web browser သည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်သော browser နှင့်အတူဖွင့်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X တွင် default browser ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ